နောက်ထပ်, Mac ရဲ့ Desktop ကို Via ဖန်သားပြင်မျှဝေခြင်းချိတ်ဆက်ရန်
Macs သိကောင်းစရာများ & Tricks
နောက်ထပ်, Mac ရဲ့ Desktop ကိုမှ screen ကိုဝေမျှမယ်
တစ်ဦးအဝေးမှ, Mac ရဲ့ Desktop ကိုချိတ်ဆက်ဖို့တစ်ခုမှာ Way ကိုသန်းပိုရှိပါတယ်
မျက်နှာပြင်ခွဲဝေမှုစွမ်းရည် Mac ကသို့တည်ဆောက်ထားသည်။ က, သင်ကဝေးလံခေါင်သီ access လုပ်နိုင် , Mac ရဲ့ desktop ပေါ်မှာ သင်ဝေးလံခေါင်ဖျား, Mac များ၏ရှေ့မှောက်၌ထိုင်ကြရုံဆိုပါကအဖြစ်, နှင့်ဖိုင်များ, ဖိုလ်ဒါနှင့် applications များကြည့်ရှု manipulate ။
ဒါကသွားလာရင်းမှလျှောက်လွှာသင်တစ်ဦးမှလက်လှမ်းမီလိုအပ်သည့်အခါတိုင်းမျှဝေ Mac အတွက်မျက်နှာပြင်ကို ဝေးလံခေါင်ဖျား, Mac ။ ဥပမာ, တစ်စုံတစ်ဦးကကူညီမှုအတွက်ကြီးမြတ်ရဲ့ ထိုကဲ့သို့သောပျက်ယွင်းနေ drive ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပေးဖို့ကူညီပေးနေအဖြစ်ပြဿနာတစ်ခု troubleshoot ။ Mac အတွက်မျက်နှာပြင်ခွဲဝေမှုနှင့်အတူသင်ဝေးလံခေါင်ဖျား, Mac ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေသည်အတိအကျအဘယ်အရာကိုမြင်လျက်, ပြသနာရှာဖွေရေးနှင့် fix ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ Mac အတွက်မျက်နှာပြင်ခွဲဝေမှုကိုလည်းသင်သည်အခြားတည်နေရာရောက်နေသည့်အခါသင့် Mac ပေါ်မှာစာရွက်စာတမ်းများနှင့် applications များဝင်ရောက်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာသင့်မိသားစုရဲ့ဘဏ္ဍာရေးကိုခြေရာခံများနှင့်စီမံခန့်ခွဲရန်ရှငျကိုသုံးပါလို့ပြောကြပါစို့။ ဒါဟာသင်အိမ်မှာရှိမဆို, Mac မှသင်၏ရှငျစဖိုင်တွေကို update နိုင်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ရှငျစတူညီတဲ့ data တွေကို file တွေကို access မျိုးစုံအသုံးပြုသူများအတွက်ဒီဇိုင်းမခံခဲ့ရပါဘူး။ သငျသညျတှငျး၌ထိုင်နေနှင့်သင်အွန်လိုင်းမှဝယ်ယူစေရန်ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာဒါ, သငျသညျထကျအရအိမ်ရုံးကိုသွားနှင့်သင့်ရှငျစအကောင့်ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်ရန်သတိရဖို့ရှိသည်။
Mac အတွက်မျက်နှာပြင်ခွဲဝေမှုနှင့်အတူ, သငျသညျ, သင့်လက်ရှိမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သင်၏နေအိမ်ရုံးခန်း, Mac ဆောင်ခဲ့ရှငျစဖွင့်လျက်, တွင်းကနေရွေ့လျားခြင်းမရှိဘဲ, သင့်အကောင့်ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Up ကို Mac ကို Screen ကိုမျှဝေခြင်းချိန်ညှိခြင်း
သငျသညျအခွားသူမြားနှငျ့သင့် Mac ရဲ့ desktop ပေါ်မှာ share နိုင်မီ, သငျသညျမျက်နှာပြင်ခွဲဝေမှုဖွင့်ရမည်။ ကြောင်းလုပ်ဖို့, ဒီလမ်းညွှန်ချက်ထဲမှာညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာ: Mac ကို Screen ကိုမျှဝေခြင်း - သင်၏ကွန်ယက်ပေါ်တွင်သင်၏ Mac ကိုရဲ့ Screen ကိုမျှဝေပါ ။
အဝေးမှ Mac အတွက် desktop သုံးစွဲခြင်း
ယခုသင်သည်သင့် Mac မျက်နှာပြင်ခွဲဝေမှုခွင့်ပြု configured ပြီ, ကတကယ်ကွန်နက်ရှင်မျှဝေမျက်နှာပြင်လုပ်ဖို့အချိန်ပါပဲ။
အခြား Mac ကိုရဲ့ desktop ပေါ်မှာဝင်ရောက်ဖို့မြောက်မြားစွာနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ ဤဆောင်းပါး၌, ငါတို့သည်သင်တို့ချိတ်ဆက်ရန်လိုအမည်သို့မဟုတ် Mac က၏ IP address ကိုသိရန်လိုအပ်သည်သောဆာဗာမီနူးဖို့ Finder ကိုဖွင့် Connect ကိုအသုံးပွုရပါလိမ့်မယ်။
ဒီ Finder ကိုနည်းလမ်းသင့်ရဲ့အကြိုက်မှမပါလျှင်တစ်ဦးဝေးလံခေါင်ဖျား, Mac ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုဆက်သွယ်ထားသော၏အခြားနည်းလမ်းများရှိပါသည်။ သငျသညျအောကျပါအ list ကနေအခြားနည်းလမ်းများထုတ်စစ်ဆေးနိုင်သည်
Mac အတွက်ဖန်သားပြင်မျှဝေခြင်းဟာ Finder ကို Sidebar အသုံးပြုခြင်း - အ sidebar မှာမဆိုကွန်ယက် Macs အပါအဝင်သင့်ရဲ့ local network ပေါ်မှာရှိသမျှ shared devices များစာရင်းနိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုလွယ်ကူစွာသင့်, Mac ရဲ့ Screen ကိုမျှဝေပါရန် - မျက်နှာပြင် Charing ဆက်သွယ်မှုစတင်ရန် iChat သို့မဟုတ်မက်ဆေ့ခ်ျများ အသုံးပြု. ပြည့်စုံစေနိုင်သည်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုလိုအပ်သင်ချိတ်ဆက်ရန်လို, Mac ၏ user ကိုအတူစာတိုပေးပို့ရေး app ထဲမှာစကားလက်ဆုံခံရဖို့အဘို့ဖြစ်၏။
အဆိုပါ Finder ကို & # 39 ကိုသုံးပြီးအဝေးမှ Mac အတွက် desktop သုံးစွဲခြင်း, s ကို Connect ကိုဆာဗာ Menu ကိုမှ
အဆိုပါ Finder ကို ပု Go ကို menu ကိုအောက်မှာတည်ရှိပါတယ်တစ် Connect ကို Server အား option ကိုရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့အပေါ်လှည့်မျက်နှာပြင်ခွဲဝေမှုရှိပါတယ်တဲ့ Mac ကိုချိတ်ဆက်ရန်ဒီ option ကိုသုံးနိုင်သည်။ မျက်နှာပြင်ခွဲဝေမှုအတွက် Connect ကိုကနေ Server ကို menu ကိုမှမရရှိနိုင်ပါသည်အဘယ်ကြောင့်သင်စဉ်းစားမိမည် အဖြေကိုမျက်နှာပြင်ခွဲဝေမှုတစ်ဦးကို client / server ကိုမော်ဒယ်ကိုအသုံးပြုသည်။ သငျသညျမျက်နှာပြင်ခွဲဝေမှုကို enable အခါ, သင်သည်သင်၏ Mac ကိုရဲ့ဖွင့် VNC (Virtual ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှု) ဆာဗာကို။
အဆိုပါ Finder ကိုတစ်ဦး Finder ကိုပြတင်းပေါက်၌ desktop သို့မဟုတ်ကလစ် နှိပ်. အပေါ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဗွေဆော် application ဖြစ်ပါတယ်သေချာအောင်လုပ်ပါ။
ကို Select လုပ်ပါဟာ Finder ကိုရဲ့ Go ကို menu ကနေ '' Server အားချိတ်ဆက်ပါ '' ။
ဆာဗာဒိုးကိုရန် Connect ကိုခုနှစ်တွင်အောက်ပါပုံစံထဲမှာ, လိပ်စာသို့မဟုတ်ပစ်မှတ်များ၏ကွန်ယက်အမည်ကို Mac ကိုဖြစ်စေရိုက်ထည့်ပါ: vnc: ဥပမာ //numeric.address.ofthe.mac: vnc: //192.168.1.25
vnc: MyMacsName ပစ်မှတ်ကို Mac ၏ကွန်ယက်အမည်ကိုသည်အဘယ်မှာရှိ // MyMacsName ။ သငျသညျကွန်ယက်နာမကိုသိမထားဘူးဆိုရင်, သင် (အထကျ Mac ကို Screen ကိုမျှဝေခြင်းတက်ချိန်ညှိခြင်းကိုကြည့်ပါ) သင်ချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးပမ်းနေသော Mac ကို၏မျှဝေခြင်း preference ကို pane ထဲကကိုဖော်ပြထားသော name ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ Connect ကို button ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သငျသညျကို set up ပုံကိုပေါ် မူတည်. Mac ကို၏မျက်နှာပြင်ခွဲဝေမှု , သင်က name နဲ့ password တောင်းနိုင်ပါသည်။ သင့်လျော်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုထည့်ပြီး Connect ကို click လုပ်ပါ။
တစ်ဦးကဝင်းဒိုးအသစ်ပစ်မှတ်ကို Mac ရဲ့ desktop ပေါ်မှာပြသ, ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့ mouse ကို cursor desktop ပေါ်မှာပြတင်းပေါက်သို့ရွှေ့ပါ။
သငျသညျယခုသင်နဲ့ Mac များ၏ရှေ့မှောက်၌ထိုင်ကြရုံဆိုပါကအတိုင်းဝေးလံခေါင်သီ desktop ပေါ်မှာအတူအပြန်အလှန်နိုင်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်ခွဲဝေမှုသင်ဝေးလံခေါင်သီ screen ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်အဘယ်အရာကိုမြင်ရန်ခွင့်ပြုသည်, သငျသညျလညျး, ထိန်းချုပ်မှုယူ app များကိုဖွင့်, ဖိုင်များ manipulate နိုင်ကြသည်နေစဉ်, သငျသညျအဝေးမှ apps များ running ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုထဲသို့ပြေးလိမ့်မည်။ ဒါဟာဝေးလံခေါင်သီ, Mac ပေါ်မှာရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ဘို့ဆင်းရဲသားရွေးချယ်မှုမျှဝေမျက်နှာပြင်အောင်, ဗီဒီယိုနှင့်အသံထွက်ဖြစ်ခြင်းထပ်တူပြုခြင်းသို့မဟုတ်ထုပ်နိုင်အောင်ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်မျက်နှာပြင်ခွဲဝေမှုသင်ဝေးလံခေါင်ဖျား, Mac မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခဲ့ကြသည်ရုံလျှင်အဖြစ်တော်တော်များများအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
မဆို Drive ကိုအပေါ်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Mac ကို Recovery ကို HD ကို Create
OS X ကို4Finder ကိုသိကောင်းစရာများ
Mac OS X ကိုမေးလ်ထဲမှာကို Message ၏ရငျးမွစျ View ကိုဘယ်လို
Mac OS X ကိုမေးလ်ဖြင့်ပေးပို့သူတစ်ဦးကို Message bounce
OS X ကိုအခမဲ့ဟယ်လို Icons
, Install စီမံခန့်ခွဲရန်, နှင့် Safari Extensions ကိုဖျက်ပစ်ရန်ရန်ကဘယ်လို
OS X ကိုမေးလ်ထဲမှာပုံမှန်အားဖြင့်ချမ်းသာတဲ့, format အီးမေးလ်များပေးပို့နည်း
လျင်မြန်စွာ OS X ကိုမေးလ်ဆက်သွယ်ရန်တစ်ဦးပေးပို့သူထည့်သွင်းနည်း
Mac OS X ကိုမေးလ်ထဲမှာအမျိုးမျိုးအကောင့်ကနေတစ်ဦးကို Message Send ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ
Google က Allo ကဘာလဲ?
2018 ခုနှစ်တွင် Buy ဖို့7အကောင်းဆုံး Laptop ကိုမှုများနှင့်အင်္ကျီလက်
Web Apps vs. native Apps ကပ: အ သာ. ကောင်း၏ရွေးချယ်မှုကဘာလဲ?
အဆိုပါသဲမုန်တိုင်း Photoshop ကိုလှုပ်ရှားမှုအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
Intel က SSD ကို 600p 512GB M.2
အဘယ်ကြောင့် My iPhone ကိုမအလုပ်အဖွဲ့ကိုရှာပါသလော
Acer မှ - နည်းပညာပံ့ပိုးမှုကိုယ်ရေးဖိုင်
သင့်ရဲ့ Laptop ကိုအတူခရီးသွားတဲ့အခါမှာထိပ်တန်းလေကြောင်းလိုင်းခရီးသွားသိကောင်းစရာများ
ဘယ်လို iPod ကို၎င်း၏အမည် Get ခဲ့သလား
မြည်းဟောင်ကောင်နိုင်ငံ Returns - Wii ဂိမ်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အဆိုပါ Giphy Cam App ကိုအတူ GIF ကို Create
သင့်ရဲ့ကားစတီရီယိုရန်ကို USB ထည့်သွင်းခြင်း
သင့်ရဲ့ Xbox One မှာ, တစျခုက S, One X သို့မဟုတ် Windows PC နဲ့သင့်ရဲ့ Xbox Controller တိုက်ဆိုင်ညှိယူဖို့ကိုဘယ်လို
Web ပေါ်ရှိအမည်မသိ: အဆိုပါအခြေခံ
Stop Windows 10 ကို Update ကို prompt
Project မှ Gotham ပြိုင်ပွဲ3မော်တော်ကားများစာရင်း
သင့်ရဲ့နေအိမ်က Wi-Fi ကိုကွန်ယက် Set Up လုပ်နည်း
အရူး Catz Blaster ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
က Internet Explorer 11 Keyboard Shortcuts